May 20, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 16
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yareey ayaa markii ugu horreysay si cad usheegtay in ay qatar amni dareemayaan inta ay ku dhex shaqeeynayaan xarunta madaxtooyada ee dalka looga arimiyo.
Waxa ay sheegtay in ay yihiin guddi madax banaan isla markaana ay uga guuraan Villa Somalia meel ay imaan karaan xisbiyada Mucaaradka balse hadii ay kusii dhex shaqeeyaan gudaha madaxtooyada ay adkaan dooto in ay ushaqeeyaan qaab dhexdhexaad ah.
War reer Koonfuroow, marwada dhan ee intaas la’eg maxaydun “Yareey” ugu naaneyseen? Naaneysyada ciyaalka yaraantooda loogu yeedho marka ay ka koraan waa laga joojiyaa ee sidaas wax u garta reer Koonfuroow.
“Yariisoow” iyo “Yareey” oo oday cirreystay iyo islaan soddoh ah loogu yeedhayo. Subxaaan! Hee waynaan maqal or arag koonfur horteed!
KKKKK Yariisow iyo Yareey lagama wado da’day eey jiraan ee waxaa laga wada muuqaalkooda oo ah in eey bar yar yahiin.
Marka qofka markuu bar yar yahay hama ha da’ yaraado ama ha ciroole ha noqdo bar yaraantiisa wey ka muuqataa.
Soomaalida waxey u maahmaahda “Daanyeerka dabadiisa ma arko ee dabada kale buu arkaa”. Ee adiga waxaad ka warantaa ina adeerkaa Xildhibaanka ah oo ka soo jeedo Sanaag oo loo yaqaan “Xildjibaan Cali Daacuun” . KKKKKK
Waligeey ma arkin dad naaneeys ka dhigtay Cudur. KKKKKK
Daacuun KKKKKK ma markuu yaraa maa cudurkaas ku dhacay. Cali Daacuun. KKKKKKK
Waqooyi iyo meelaha noo faanineysid waxeey la baxaan “INA LAX WAS”. KKKKKK
SUBXAANA WAXAAS WAYNAN MAQAL OR ARAG WAQOOYI HORTEED.
Waxasi waa markay faraha lagashay sl,ok
Qof kasto faraha laso gala sl sidaas ayaa udanbeysa
Jamhuriyada barakaysan ee somaliland
Faarax jaamac xaashi says:
Faarax jaamac xaashi
Filimkii Goodax wuu soo xirmay filimkii Xaliimo Yareey ayaa bilowday imisa jeer ayaad soo qorteen Xaliimo Yareey maanta qoraalkii kan ka horeeyay ayuu ahaa warka saxd ah ee Xaliimo Yareey midkaan dambe waa Made in Marqaan news lol
Kkkkkk. Waad iga qoslisay. Naaneysaha markey gaadho Reer Woqooyiga ayaa ugu naaneyso waalwaalan dheh. Kkkk
Waa Runtaa. Reer Woqooyi hadaan nahay noogumaba baxdo bilaa naaneys. Xitaa Xoolaha ayaanu magac iyo naaneysba iskugu darnaa.
Laakiinse idinku naaneysaha maxaad ku fashaan, naaneysba hadeyndaan karinba odhaahdeeda. Qaar Reer Muqdisho ah ayaan arkay oo Naaneystii naneys waaye ku haya. Kkk Mise erey kale ayaad u taqaanaan?
KKKKK adigaa ka daray. KKKK maxaa tiri “Naaneystii naneys waaye” KKKKKKKK
Ahmedow arrintaas adiga ku dareysid oo jeeb kaada kala soo baxday. KKKKK waligey waxaas oo kale ma maqlin. KKKK
Soomaali meel kasto eey joogto naaneys wey ka mid tahay maadaama magacyadeena aan la baxno aan badneyn oo markasto isla kuwi ku soo wareegtaan oo ah Maxamed, Cabdi, Cali, Axmed, Nuur…..iwn.. marka waa nagu qasab dadka si loo kala garto in magacii naaneys la raaciyaa.
Laakiin waa sidaad sheegtayoo naaneysyada ee la baxaan reer waqooyiga waa kuwaa waalwaalan oo mar hadii aad maqashid aad waligaa aadan iloobeynin KKKKKKKKK
Sxb jeebada kalama soo bixin taas. Waxaan daawaday wariyayaal dhan oo wareysi qaadeya oo ereyga ‘naaneysta’ aynu nidhaahno ugu dhawaaqay ‘naneys’. Laba jeer oo kala duwan ayaan arkey. Kolkaasaan is idhi oo tollow naaneysta ma eray kale oo Reer Koonfureedku leeyihiin ayaa jira oo kuwani’se wariyanimo ahaan ayay kan caamka ah u soo xiganayaan. Sababta fikradaas igu dhalisayna waa ereygii oo ay kari waayeen ana odhaahdiisii oo ay si saxsan ugu dhawaaqi Kari waayeen. ‘Naaneys’ iyo ‘naneys’ isku dhawaaq maahan.
Sidoo kale ereyga ‘quruurux’ oo ay kari kari la yihiina waan arkey iyagii leh ‘qururux’ iyo ereyo kale oon is idhi malaha warqad bey ka akhrinayaane hore ereygaas umay maqal.
Naaneystii iigu yaabka badneed ee aan arko wuxuu ahaa mid ay u bixiyeen nin curyaan ahaa oo gacmaha ku guurguurta ma dhabarkuu la’aa ma garanayo laakiin marka uu socdo lugaha iyo gacmaha ayuu ku wada socon jiray markaa qaarkiisa dambe ayaa kor u yara taagmi jiray weliba qeybta dabada ah waxay u bixiyeen ( Dhuuso cir ku toogte) maxaa abuse ah Soomaa.lida
Kkkkkk Malaha mid dabo taagnaa ayuu wajiga ka toogtay. Kkkkkkk ‘Samo u dire’ iney yidhaahdaan ayay aheyd oo ay u Yara maldahaan. Kkkkkkk
Illaahay danbigooda ha iga dhaafee, berigaan yaryareyn waxaan aqaaneyn labo wada dhashay oo lanodhan jirey Dhuxusha iyo Digsi Gubatay. Waxey ahaayeen labo inan oo aad u madmadow. Insha Allaah waxaan u rajeynayaa ragaasi iney weli caafimaad ku nool yihiin.
Ereyga waa naaneys laakiin waxaa suurowdo ku dhawaaqidda in dadka ku kala duwan yahiin. Maadaama af Soomaaliga uu badan yahay haddana wax oo noo wada dhexeeyo laysku raacin waxaa la yiraah midka reer Muduga in uu yahay midka Soomaalida u dhaxeeyo laakiin anniga waan ka soo horjeedaa sababto midka laysku raaco waa in uu ahaado midka Soomaalida badan ku hadasho.
Af Somaaliga waxuu ka yimaadaa miyiga ayaa la yiri annagana dhal magaalo ayaan nahay marka waan casriyeenay oo waa la fududeeyay. KKKKKK naaneys, naneys. kkkk quruurux, qururux. KKK odhaah, oraah KKKKKK
Ahmed saaxiib naaneysta waalan qaata, af Soomaaliga miyigana qaata annaga waxaan qaadaneynaa af Soomaaliga magaalada. KKKKKKK
Soory anigoon magaceega Samaale ku soo qorin buu iga soo baxay
Naaneys waxaa kaloo u naqaanaa
Koofaar sxb af af somaligu waa badanyahay midkastana waa sax tee sax ah kow iyo toban iyo toban iyo kow?
Toban iyo kow aa sax san sababtoo ah markaad qoreysid waxaa la qoraa 11, 12, 13, 14 waxaa mar walba horeeyo tobanka.